lahatsoratra 93 238 amin’ny teny malagasy
Artemisia annua (tapany ambony)
Ny Artemisia annua, izay antsoin'ny Malagasy koa amin'ny anarana nohagasina hoe Artemizià, dia karazana zavamaniry ao amin'ny fianakavian'ny Asteraceae, avy any Eorasia sy any Afrika Avaratra, izay efa nampidirina koa tany aloha be tao amin'ireo faritra manana toetany antonony ao Amerika, ary hatramin'ny taona 1991 dia nampidirina tao Afrika atsimon'i Sahara sy any Amerika Latina. Karazan-javamaniry madinika ny artemisia, izay ampiasaina amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa mba hiadiana amin'ny tazo sy ny virosy. Ny artemisia annua dia ahitana singa simika maro ka isan'izany ny artemizinina izay mahomby amin'ny ady atao amin'ny kantsentsitra sahala amin'ny Plasmôdiôma izay miteraka ny tazomoka. (tohiny...)
Talata, 29 Septambra 2020
Mbola tsy misy ankehitriny ny pejy mikasika ny Talata 29 Septambra ao amin'ny efemerida. Ka raha tianao dia azonao ampiana na foronina ity pejy ity.